ရိုက်တာ သတင်းထောက်နှစ်ဦးကို ထောင်ဒဏ် ခုနစ်နှစ်စီ ချမှတ် လွတ်မြောက်ရေး အတွက် အထက်တရားရုံး?? - Yangon Media Group
ရိုက်တာသတင်း ထောက်နှစ်ဦးကို မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ လျှို့ဝှက်ချက်များ အက်ဥပဒေဖြင့် ထောင်ဒဏ်ခုနစ်နှစ်စီ ချမှတ်လိုက်ကြောင်းသိရသည်။ စက်တင်ဘာ ၃ ရက်က မြောက်ပိုင်းခရိုင် တရားရုံး၌အမှုမှ သတင်းထောက် ကိုသက် ဦးမောင်(ခ) ဝလုံးနှင့် ကိုကျော်စိုးဦး (ခ)မိုးအောင်တို့နှစ်ဦးသည် ပြစ်မှုထင်ရှားကြောင်း ပေါ်ပေါက်သဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ လျှို့ဝှက်ချက်များ အက်ဥပဒေပုဒ်မ ၃(၁)(ဂ)အရ ထောင်ဒဏ်ခုနစ်နှစ်စီကျခံစေရန် ဒုတိယခရိုင်တရားသူကြီး ဦးရဲလွင်က အမိန့် ချမှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ရိုက်တာသတင်းထောက်နှစ်ဦး၏ ရှေ့နေ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးသန်း ဇော်အောင်က ”စီရင်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး တော့ အင်မတန်မှ စိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီကို သွားနေတယ်လို့ ပြောတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီအရေး၊ လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်မှု၊ တရားဥပဒေစိုး မိုးရေးဆိုင်ရာအခြေအနေတွေက ဆိုးရွားနေပြီဆိုတာကို ပြသလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်”ဟု အမိန့်ချအပြီးတွင် မီဒီယာများကို ပြောသည်။
”မြန်မာမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်အပေါ် အင်မတန်ကြီးမားတဲ့ဆိုးကျိုး သက်ရောက်မှုရှိတယ်။ ဒီစီရင်ချက် ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံရင်ဆိုင်ရတဲ့ အခက်အခဲတွေ။ ကြုံတွေ့နိုင်တဲ့အခက်အခဲတွေ ပိုပြီးတော့ ဆိုးသွားနိုင်မယ့် အနေအထားမျိုးရှိတယ်လို့ သုံးသပ်လို့ရတယ်။ တရားသူကြီးရဲ့ ဆင်ခြင်တုံတရားသည် အများကြီး မေးခွန်းထုတ်စရာရှိတယ်”ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။ သတင်းထောက်နှစ်ဦးကို ချုပ်ရက် ထုတ်နုတ်ခံစားခွင့်ပြုကြောင်း သိရသည်။
”သုံးသပ်တဲ့ထဲမှာ ဝလုံးတို့ဆီကတွေ့တဲ့ စာရွက်စာတမ်းနှစ်ရွက် အပြင်တယ်လီဖုန်းထဲက စာရွက်စာတမ်းတွေကလည်း ထိပ်တန်းလျှို့ဝှက်ချက်တွေဖြစ်တယ်။ သူတို့လက်ထဲမှာတွေ့တယ်ဆိုတာကို သုံးသပ်တယ်။ ဝလုံးအိမ်မှာတွေ့တဲ့ ဒိုင်ယာ ရီဟောင်းထဲက AA က ကိုညိုထွန်း အောင်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်။ ဒီနံပါတ်ကို တွေ့ရှိခြင်းအားဖြင့် ဒီဟာတွေသည် နိုင်ငံတော်နဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေကို ပေးပို့နိုင်တန်ရာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ သုံးသပ်ပြီးချလိုက်တာ” ဟု တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးသန်းဇော်အောင်က ပြောသည်။
အပြီးသတ်အမိန့်ရုံးချိန်းသို့ သတင်းယူသည့် မီဒီယာအများအ ပြား၊ သတင်းထောက်နှစ်ဦးကိုဝန်းရံသူများ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသြစ တြေးလျသံအမတ်ကြီး Nicholas Coppel၊ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး၊ ဆွီဒင်သံမှူးကြီး အပါအဝင် နိုင်ငံတကာသံတမန်များလည်း လာရောက်ခဲ့သည်။ သတင်းထောက်ကိုကျော်စိုးဦးက ”ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ဘာအ ပြစ်မှလည်းမလုပ်ခဲ့ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ကသူလျှိုတွေမဟုတ်ဘူး။ သတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်အတွက် ဆက်ပြီး တော့ တိုက်ပွဲဝင်ရမှာပဲ။ အစိုးရကို တောင်းဆိုချင်တာ ပြည်သူတွေရဲ့ နားမျက်စိကိုမပိတ်ပါနဲ့။ ကျွန်တော်တို့တွေကို ထောင်ထဲမှာထားထား လို့ရတယ်”ဟု အမိန့်ချမှုအပြီးတွင် ပြောသည်။
မိမိတို့နိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီစနစ်နှင့် သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကို ခြိမ်း ခြောက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ အမှားမလုပ်ခဲ့သည့်အတွက် ကြောက်ရွံ့သွားမည်မဟုတ်ကြောင်း သတင်း ထောက် ကိုဝလုံးက ပြောသည်။
”သတင်းသမားကျင့်ဝတ်နဲ့အညီဆောင်ရွက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်အပေါ်မှာ အကျိုးယုတ် အောင်လည်း ဘာတစ်ခုမှလည်းမလုပ်ခဲ့ဘူး။ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးနဲ့ဆိုင်တဲ့စာရွက်တွေ့လို့ ကျွန်တော်တို့ကို ထောင်ချတယ်။ ကိုညိုထွန်းအောင်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုတွေ့လို့ဆိုပြီး ထောင် ချတယ်။ ဒါဟာ တရားမျှတမှုရှိလား” ဟု အမိန့်ချမှုအပြီးတွင်ပြောသည်။
အမိန့်ချမှတ်မှုအပေါ် စိတ်မ ကောင်းဖြစ်ကြောင်း သတင်းထောက် ကိုကျော်စိုးဦး၏ မိသားစုဝင်တစ်ဦးက ငိုကြွေးလျက်ပြောသည်။ မြန်မာ့မီဒီယာရှေ့နေများကွန်ရက်ဥက္ကဋ္ဌ တရားလွှတ်တော် ဦး အောင်စိုးက ”သက်သေပြရင်တာ ဝန်ကနှစ်ဖက်စလုံးမှာ ဒီထက်ပိုပြီး ခိုင်မာဖို့လိုတယ်။ တရားလိုဘက်က ခိုင်မာဖို့လိုသလို တရားခံတွေဘက်ကလည်း ဒီထက်ခိုင်မာဖို့လိုတယ်။ သုံးသပ်ချက်ကိုနားထောင် ကြည့်တော့ သက်သေပြနိုင်ဖို့ နှစ်ဖက်စလုံးမှာ ဒီထက်ခိုင်မာဖို့လိုတယ်။ ဒီအမှုမှာအင်မတန်ထူးခြားတဲ့အဖြစ်အပျက်က ပေါ်လာတယ်။ တရားလုိုဘက်ကပြတဲ့ သက်သေဒုရဲမှူး မိုးရန်နိုင်ရဲ့ ထွက်ဆိုချက်က တစ်ကမ္ဘာလုံးကို အံ့အားသင့်ချောက် ခြားစေတဲ့ထွက်ဆိုချက်ဖြစ်တယ်။တရားဥပဒေလောကတစ်ခုလုံး တရားစီရင်ရေးစနစ်ကိုလည်း အံ့အားသင့်စေတဲ့ ထွက်ဆိုချက်ဖြစ်တယ်။ ဒီထွက်ဆိုချက်ဟာ ခိုင်မာ ခြင်း၊ မခိုင်မာခြင်း အထောက်အထားကို နှစ်ဖက်စလုံးက အတိအကျ မပြနိုင်ဘူးလို့သုံးသပ်တယ်။ သူတို့ မှာတွေ့တဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေသည် ဒုရဲမှူးမိုးရန်နိုင်ရဲ့ထွက်ဆိုချက်ဟုတ် မဟုတ် အရေးပါတဲ့ Issue ဖြစ်တယ်။ မိုးရန်နိုင်ကို ထောက်ခံတဲ့သက်သေ မရှိဘူးဆိုတဲ့အတွက် အဲ့ဒါကိုပယ်လိုက်တဲ့အချက်ဟာ စဉ်းစားစရာရှိတယ်”ဟု ပြောသည်။
အမိန့်ချမှုသည် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကို တပ်လှန့်နှိုးဆော်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။ ”နှစ်ဖက်စလုံးက ဆက်လက် ပြီးတော့ မပြီးဆုံးသေးတဲ့ကိစ္စတစ်ရပ်ကို အထက်တရားရုံးတွေအဆင့်ဆင့်မှာ ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာ စစ်မှန်တဲ့တရားမျှတတဲ့ အဖြေတစ်ခုဖို့ ကြိုးစားရမှာပေါ့” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။ အမိန့်ချမှုအပြီးတွင် ဝန်းရံသူများနှင့် လုံခြုံရေးယူနေသည့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့တို့ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ”မင်းတို့မတရားဘူးနော်”ဟု ဝန်းရံသူတစ်ဦးက ပြောသည်။ ရိုက်တာသတင်းထောက်နှစ်ဦးသည် နိုင်ငံတကာမီဒီယာကစားကွက်တွင် သားကောင်ဖြစ်သွားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သတင်းစာဆရာတစ် ဦးက ပြောသည်။
”အပြစ်မရှိဘူးလို့ ယုံကြည်တယ်။ ကစားကွက်ထဲမှာ ဓားစားခံဖြစ်သွားတယ်”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။ ယခုဆုံးဖြတ်ချက်သည် အောက် တရားရုံး၏ဆုံးဖြတ်ချက်မှာ မှန်ကန်သည်ဟု ပြော၍မရဘဲ အထက်တရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်ကသာ အတည်ဖြစ်ကြောင်း ဝါရင့်ရှေ့နေဦး အောင်သိန်းက ပြောသည်။ ယခုအစိုးရလက်ထက်တွင် သတင်းမီဒီယာသမားများကို တရားစွဲဆိုမှု၂၄မှုရှိကြောင်း လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့် လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့(အသံ)ထံမှ သိရသည်။ ရိုက်တာသတင်းဌာနမှ သတင်း ထောက် ကိုသက်ဦးမောင်(ခ)ဝလုံး နှင့် ကိုကျော်စိုးဦး(ခ)မိုးအောင်တို့ နှစ်ဦးကို အရေးကြီး လုံခြုံရေးစာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားများ တွေ့ရှိသည်ဟုဆိုကာ ၂ဝ၁၇ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၂ရက်၊ ညပိုင်းက ဖမ်းဆီးအမှုဖွင့်ခဲ့သည်။
သတင်း လွတ်လပ်ခွင့်ကို အဟန့်အတားပြုနေသော ဥပဒေများကို ပြင်ဆင်ရန် ကြိုးစားနေဟု ပြန်ကြားရေး ဒ??
လားရှိုးမြို့၌ အမျိုးသားတစ်ဦး ဘုံကျောင်းပေါ်မှ ခုန်ချ သေကြောင်းကြံခဲ့သော်လည်း အသက် မသေဘဲ ဒ??
ရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့် ငါးကန်များ ပျက်စီးပါက အစိုးရအနေဖြင့် ကူညီထောက်ပံ့ပေးမည်
မြောင်းမြတံတား ကျိုးကျရာတွင် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းမှ ဖုန်းကြိုး ပါဝင်သွားသည့်အတွက်ြ